Fursadii ugu dambeysay ee aan ku soo booqanno Victoria Falls ka hor inta aysan qallalin?
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Jebinta Wararka Safarka » Fursadii ugu dambeysay ee aan ku soo booqanno Victoria Falls ka hor inta aysan qallalin?
Wararka Ururada • Jebinta Wararka Safarka • News • Ammaanka • Dalxiiska • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Warka Safarka Safarka • Daalacanayo Hadda • Wararka kala duwan • Zambia War Deg Deg Ah • Zimbabwe War Deg Deg Ah
Daneeyayaasha Zimbabwe ee ku jira warshadaha dalxiiska, oo ay ka mid ahaayeen saraakiil ka tirsan Wasaaradda Deegaanka, Cimilada, Dalxiiska iyo Warshadaha Soo-dhawaynta, Hay'adda Dalxiiska ee Zimbabwe (ZTA), Hay'adaha Qaranka ee Dalxiiska iyo Maareynta Duurjoogta ee Zimbabwe, Golaha Ganacsiga Dalxiiska ee Zimbabwe, hudheelada, dalxiisayaasha dalxiiska, dalxiiska adeeg bixiyeyaasha, Victoria Falls Municipality, waaxaha dowlada iyo ciyaartooy kale, ayaa booqday keymaha shalay si ay u qiimeeyaan xaalada ka dib markii ay soo baxeen warbixino warbaahineed oo ku saabsan Victoria Falls oo qallajineysa khatarna u soo jiidaneysa warshadaha safarka iyo dalxiiska ee muhiimka u ah Zimbabwe iyo Zambia.
Daneeyayaasha oo ku hoos socda calanka "Dalxiiska Kooxda", waxay goor hore shir ku qabteen xerada Robins ee ku taal Hwange National Park jimcihii ilaa shalay halkaas oo ay ku go'aansadeen inay la yimaadaan istiraatiijiyad isgaarsiineed oo qalalaase ah oo waajibaadkeedu noqon doono inay si joogto ah uga warbixiyaan gobolka. arrimaha ka socda warshadaha si looga hortago dacaayadaha xun.
Toddobaadkii la soo dhaafey, sawirrada iyo fiidyowyada fiidiyowga qalalan ee Victoria waxay ku socdeen shabakadaha warbaahinta bulshada iyo kuwa caalamiga ah.
Madaxa dalxiiska ee Zimbabwe, givemore Chidzidzi ayaa sheegay in wabiga uu yahay mid xilliyeed.
“Fallaaraha quruxda badan ee Victoria Falls waa biyo-dhaca ugu weyn welina waa kaarkeenna ugu weyn. Sida aad aragtaanba, waa wax layaableh weligiisba sida xaddiga biyaha ee dhacayaa ay runtii yihiin wax lala yaabo, ”ayuu yidhi.
“Hal shay oo ay dadku u baahan yihiin inay ka ogaadaan biyo-dhaca dabiiciga ah ayaa ah inuu yahay mid xilliyeed sida wabiyada kale oo dhan, haddana waxaan helnay heerar biyo hagaagsan.
“Waxaan ku dhiirigalinaynaa qof kasta oo jeclaan lahaa inuu arko Victoria Falls oo soo booqata soo jiidashada in ka badan hal jeer iyo xilliyo kala duwan. Iminka wax saameyn ah kuma lahan dalxiiska dadkuna waxay u imaanayeen sidii caadiga ahayd. ”
Xubin ka tirsan guddiga ZTA Mr. Blessing Munyenyiwa ayaa sheegay in aysan jirin cilmi baaris la ogyahay oo muujineysa in Falls uu qallali doono inta uu nool yahay.
Sannadkan xafladaha carnival iyo Mapopoma ayaa loo qorsheeyay Victoria Falls.
Cuthbert Ncube, Gudoomiyaha Guddiga Dalxiiska Afrika ayaa ka codsaday kuwa qorshaynaya booqasho ay ku tagayaan Afrika: “Haa, fadlan booqo Victoria Falls sidii ay ahayd fursadii kuugu dambeysay, laakiin fadlan ku soo noqo markasta iyo mar kale - way kula jiri doontaa adiga weynaantiisa.